တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့,2layer rigid printed board. TG170, HASL LF, 2အောင်စကြေးနီကြီးမားသအလွှာတင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့��TG170��HASL LF�်အမိန့် - တရုတ်တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့,2layer rigid printed board. TG170, HASL LF, 2အောင်စကြေးနီကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်အမိန့်ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
2 အလွှာ FR4 TG170 အစိမ်းရောင်
2 အလွှာတင်းကျပ် ပျဉ်ပြား
2 အလွှာ TG170 2oz
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, တစ်ခုတည်းအရွယ်အစား 92,71 * 20.32MM, ပြားအဖြစ်သင်္ဘော, 1.6မီလီမီတာ -2အောင်စ -2အလွှာ - FR4 170Tg, အစိမ်းရောင်ဂဟေဆက် gloss x ကိုတှနျးလှနျ 2, အဖြူရောင် Silkscreen က x 2, HASL LF. ul မှတ်သားခြင်းနှင့်အတည်ပြု, အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 2, IPC CLASS 2, အားလုံး soldermask ဆည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်.
နည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေ TG170 ပစ္စည်းနှင့် 2oz ကြေးနီဖြစ်ပါသည်. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသည်. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB), တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့,21oz ကြေးနီနှင့်အတူ L ကိုတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB, ENIG ကုသမှု, မိပေါက်မြို့ရိုးကိုကြေးနီ 25um PCB